U hambalyeyn cayaarahanada iyo reer Puntland. – Radio Daljir
U hambalyeyn cayaarahanada iyo reer Puntland.
Janaayo 1, 2011 12:00 b 0
Australia, Jan 01 – Annigoo ku hadlaya magaca Qurbajoogta reer Puntalnd ee ku sugan Australia waxaan ugu horrayn hambalyo u dirayaa Kooxda Banaadir ee kubbada cagta oo ku guulaysatay tartanka kubbada cagta ee Gobolada oo ku soo gabagaboobey Garowe oo ah magaalamadaxda Dawlad Goboleedka Puntland, Somalia. Sidoo kale, waxaa iyaguna hambalyo mudan labada kooxood oo kala galay kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad, oo ah Gobolka Bari iyo Gobolka Nugal iyo dhamaan ka qaygalaayaasha tartaankaan.
Sidoo kale, waxaa amaan aan la soo koobi karin mudan dadka Puntland iyo xukuumadooda oo martigeliyey cayaarahanada gobolada Somaliyeed, taas oo ah markii ugu horreeyey oo ay dhacdo cayaar noocaan oo kale ah intii dagaalada sokeeye ka dhaceen Soomaalia.
Puntland waxay mar walba ku celcelisaa inay yihiin qayb ka ah Soomaalia una taagan yihiin danta dadka Soomaaliyeed, wallaalayntooda, ilaalinta midnimadooda iyo sharftooda, barnaamijkanina wuxuu si aan shaki lahayn uga markhaanti kacayaa mawqifka bulsho iyo siyaasadeed ee reer Puntland oo ku salaysan qodobada aan kor ku xusay.
Haddaanu nahay, Qurba-joobta reer Puntland ee reer Australia, waxaan illaahay ka baryaynaa in barnaamijkaan cayaareed uu noqdo daahfurka isu soo dhowaanshaha iyo wallaalnimada ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan.
Waxaa xusud gaar ah mudan taariikhda Soomaalidana baal dahab ah ka geli doona in cayaarahano ka yimid Muqdishu yimaadaan Garowe, ku cayaaraan si nabad iyo kalsooniyi ku jirto, koobkana ku badiyaan, si sharaf lehna loogu guddoonsiiyo koob dahab ah.
Ugu dambayn waxaa mudan in si gaar ah loogu hambalyeeyo xukuumada Puntland oo uu madaxwenaha ka yahay Cabdiraxman Maxamed Moxamud (Faroole), iyo dhamaan dadkii sida gaarka ah lugta ugu lahaa qabanqaabinta, isku-dubaridka iyo fulinta cayaaraha ku soo afjarmay Garowe, Puntland.
Guddooomiyaha Qurbajoogta Puntland, Australia,
Cumar Maxamuud Faarax (Dhollawaa)
Dab ka dhashay shoodh koronto oo gubey guri ku yaala magaaladda Buuhoodle.
Xulka Bari oo 3-1 kaga badiyey xulka J. Hoose, finaalahana la ciyaari doona xulka Banaadir.